Media Mission Nepal बिमा कम्पनीका लागि छुट्टै ऋणपत्रको तयारी ! - Media Mission Nepal
बिमा कम्पनीका लागि छुट्टै ऋणपत्रको तयारी !
Published On :7April, 2021 9:10 am
काठमाडौं, २४ चैत : बिमा कम्पनीहरूको लगानीयोग्य रकमलाई लक्षित गरी लामो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्नका लागि बिमा समितिले सुझाव दिएको छ ।
मा कम्पनीहरूसँग लामो अवधिको लगानीयोग्य पुँजी भए पनि उक्त रकम लगानी गर्ने क्षेत्र नभएको भन्दै त्यसका लागि बण्ड निष्कासन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । “बिमा कम्पनीहरूसँग रहेको लामो अवधिको पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा थुप्रिएको छ,” समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, “यसलाई देश विकासमा प्रयोग गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको बण्ड जारी गर्न सरकारलाई सुझाव पठाएका छौं ।”
कारोबार दैनिकमा खबर छापिएको छ ।